Ka Jir Soomaaliya Coronavirus - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
Danjire Yusuf - Garaad Cumar Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya
12 Febraayo 2020
Lahaanshaha sawirka Getty Images/SEYLLOU
Image caption Shaqaalaha caafimaadka oo ka shaqeynaya shaybaar si wey n loo xakameeyo oo lagu baaro caabuqa Corona - Dakar, Senegal - February 3, 20202
In ka badan kun ruux ayaa u dhintay cudurka Coronavirus. In ka badan afartan kun oo ruuxna wuu ku dhacay caalamka oo dhan, Shiinuhuba ha ugu badnaadee.
Coronavirus waa cudur faafi og oo fara ba'an ku haya dalka Shiinaha gaareyna waddammo badan oo ah Bari iyo Koofur Bari Aasiya, Yurub iyo Ameerika.
Ururka Caafimaadka Adduunka, WHO, wuxuu ku dhawaaqay in magaca rasmiga ah ee cudurku uu yahay Covid-19.
Dalka Shiinuhu dagaal xoog leh ayuu hadda cudurka kula jiraa xagga xakameynta iyo daaweyntaba.
Waddammo badan oo adduunka ahi waa ay ka gaashaanteen in aan cudurkaasi gaarin dalkooda, haddii uu gaarana aanuu ku faafin.
Wargeyska the Guardian oo London ka soo baxa, oo soo xiganaya Khabiir reer Hong Kong ah, wuxuu qoray in haddii cudurkan la xakeym kari waayo ay dhici karto in uu ku dhaco dadka adduunka ku nool marka saddex loo qeybiyo laba dalool.
Taa wuxuu macnaheedu yahay in boqol qof oo kasta oo dunida ku nool, ay suurta gal tahay in lixdan ka mid ah uu cudurkani ku dhaco.
Lahaanshaha sawirka Getty Images/MICHAEL TEWELDE
Image caption Mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka Itoobiya oo isu diyaarinaya baaritaanka dadka ka soo degaya garoonka caalamiga ah ee Addis Ababa - January 30, 2020.
Qaaraddeenna Afrika weli lama hayo qof la hubo in uu cudurku ku dhacay, marka laga reebo shan ruux oo la tuhmay oo weli la sugayo natiijada baaritaankooda, sida ay faafisay idaacadda Mareykanka ee NPR.
Haddana qaaraddu ma haysato qalab ugu filan baaritaanka lagu ogaado qofka qaba cudurka. Afrikada Saxaaraha ka hooseysa oo dhan laba sheybaar oo keliya ayaa ku yaallay oo caddeyn kara markii uu cudurku dillaacay.
Afrika oo dhan Senegal iyo Koofur Afrika ayay baaritaanka u direysay ama Yurub. Hadda waxa la gaarsiiyay 11 sheybaar. Macnuhu wuxuu yahay 47 dal in ay haystaan 11 sheybaar oo keliya.
Siyaasadda Caafimaad ee ay hadda qaaraddu ku dadaaleyso waa in ay isku daydo in aan cudurku sooba gaarin.
Waxaa taxaddar gaar ah u baahan goobaha laga soo galo dalka ee hawada iyo badda.
Arday iyo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Shiine ah ayaa intuba dalkeenna yimaada. Shalay Soomaali iyo Shiine intaba waa ay ka yimaadeen dalka Shiinaha sida aan maqlayo.
WHO waxay sheegtay in aanay ku talin in safar la joojiyo, laakiin waxay dalbeysaa in si sax ah loo baaro musaafurka.
Shan shay oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato caabuqa Corona
Canuggii ugu yaraa oo 30 saacadood jir ah oo laga helay caabuqa corona
Coronavirus: “Aniga iyo gabadheyda waan bixi karnaa, balse xaaskeyga waa inay harto”
Waxaa kale oo ay ku tilmaantay in Qaaradda Afrika meelo badan oo ka mid ah ay ku yar yihiin qalabka lagu neefsado ee lama huraanka u ah qofka uu cudurku haleelo.
Soomaaliya waxaan u baahan nahay in mas'uuliyiinteenna caafimaadka iyo Dowladda oo dhami ay qaataan tallaabooyin qiyaasan oo looga feejignaanayo in aan cudurkani soo gaarin dalkeenna.
Ka hortag waa suurta gal haddii dadaalkiisa lala yimaado.
Marka la fiiriyo Xaaladda hooseysa ee adeegga caafimaad ee dalkeenna iyo dhaqankeenna ay ka mid tahay salaanta gacanta la is gelinayo ee faraha badan, haddii uu na soo gaaro Covid-19, waa halis aan la saadaalin karin waxa ay dhali karto.
Image caption Safiirka Shiinaha ee ku sugan Muqdisho ayaa shalay shir jaraa'id kaga hadlay xaaladda Coronavirus
Sidaa darteed waxaa ila habboon in looga feejignaado sida halis Amni Qaran.
Dhakhaatiirta caalamka qaarkood waxay dadwaynaha kula taliyeen in la iska dhowro fara ku taabashada sanka, afka iyo indhaha adiga oo aan saabbuun ku faraxalan.
Iyada oo aan arga-gax la abuurin, haddana waxaa muhiim ah in hey'adaha qaabbilsani ay talo wanaagsan bixiyaan, qaadaanna tallaabooyin feejignaan ah, lagana fekero oo loo diyaar garoobo haddiiba uu na soo gaaro waxa markiiba lagu dhaqaaqi lahaa iyo Cidda lala kaashan karo.
Waan ku kalsoonahay in ay mas'uuliyiinta Caafimaadka iyo Dowladduba ay iga macluumaad badan yihiin, taasi igama reebeyso baraarujin.
Allow naga badbaadi halistiisa iyo halis kale oo kasta.
Warbixintan waxaa qoray Yusuf-Garaad, Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya. Waxaad qoraaladiisa ka daalacan kartaa: yusuf-garaad.blogspot.co.uk , waxaadna kala xiriiri kartaa barta uu Facebook-ga ku leeyahay
2 Febraayo 2020
4 Febraayo 2020
Cudurka corona oo saameeyay dhaqaalaha Shiinaha
3 Febraayo 2020
Shiinaha oo dhameystiray isbitaal lagu dhisay lix maalmood
29 Jannaayo 2020
Muuqaal Coronavirus: Dadkii la karantiilay ee magaalada Wuhan oo daaqadaha isaga heesaya